Voadika ny 04 Desambra 2011 11:12 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Português, English
Ny 7 Novambra, ilay “plateforme” fitrandrahan-tsolika Frade, izay an'ny orinasa Amerikana mpandavaka Chevron-Texaco, dia nanomboka namery solitany mbola tsy voahodina. Hita ao Bacia de Campos izy io, 350 km any Avaratr'i Rio de Janeiro. Ny Alatsinainy 21 Novambra, Chevron dia voasazy handoa ny onitra ambony indrindra izay IBAMA (Ivon-toerana Breziliana ho an'ny tontolo iainana sy angovo azo havaozina) no namaritra izany, $R50 tapitrisa (eo ho eo amin'ny $28 tapitrisa USD).
Na dia inoana aza ankehitriny fa efa voafehy ilay fiparitahan'ny solitany, andrasana ny fanazavana misimisy kokoa avy amin'ny Chevron ato anaty ny andro vitsy ho avy. Nandritra izany, ny fahamaivanan'ny lahatsoratra hita tamin'ny filazam-baovao mahazatra no nahatonga ireo bilaogera maro hanakiana ny tsy fahampian'ny fahamatorana eo amin'ny asa fanaovan-gazety manoloana ny vokatr'iny loza iny ho an'ny tontolo iainana.
Ilay fahavakisan'ny solitanin'i Chevron tao Bacia de Campos, 18 Novambra 2011. Sary avy amin'i Rogério Santana, Governemantan'i Rio, ho havoaka
“Mamono ny fahanginana”
Ilay mpanao gazety Fernando Brito, tao amin'ny bilaogin'ilay solombavam-bahoaka federaly Brizola Neto Tijolaço [pt], dia nanapa-kevitra ny “hilomano hanohitra ny onjan'ny filazam-baovao” izay raisiny ho toy ny famerenana mamoaka tsotra sy mazava ny fampitam-baovao avy amin'ny Chevron fotsiny. Niasa mafy tsy nisy ohatra izany izy mba hahafahany manadihady hitondra hazavana amin'ilay raharaha, miaraka amin'ny lahatsoratra 25 ahitana fanambarana tao anatin'ny roa herinandro fotsiny. Nolazainy tao aminà fanadihadiana iray [pt] tao amin'ny bilaogy Vi O mundo ireo marika izay nampiseho fa misy zavatra tsy mety amin'ny fandrakofan'ireo filazam-baovao mahazatra :
Voalohany, Chevron-Texaco dia ela vao niaiky ilay olana ary tamin'ny fotoana nanaovana izany, dia tamin'ny taratasy kitoatoa, nanazavany fa nisy fivakisana voamarika “teo anelanelan'ny fari-pitrandrahan'i Frade sy ny any Roncador” – izay toeram-pitrandrahan'i Petrobras – izay, raha ny marina, dia nitranga teo akaikin'ny toerana misy ny fitaovam-pitrandrahany, ilay Sedco706 (…).
Faharoa, ny tantara milaza fa lesoka ara-jeolojika no nahatonga ilay izy. Tsy mampino raha lesoka ampy hahatonga fahaverezana solika anaty ranomasina no tsy hita tamin'ny fitsirihana “sismique” talohan'ny fitrandrahana.
Fahatelo, ny 11 Novambra, na dia tao aorian'ny fanokafan'ny Filoha Rousseff fanadihadiana mikasika ilay raharaha aza, ny filazam-baovaontsika dia (…) mbola nanohy nanome lanja kely na tsy nisy mihitsy aza ilay raharaha Chevron-Texaco, orinasa goavana tsara fifandraisana amin'ny Ramose José Serra. [Governora sady Ben'ny tananan'i Sao Paulo, kandidà ho filoha Braziliana teo aloha ].
Mba anomezana fanazavana misimisy momba ity teboka fahatelo ity, ilay mpahay toekarena Pedro Migão, tao amin'ny bilaogy Ouro de Tolo, dia namerina ilay lahatsoratra nosoratany tamin'ny taona lasa tao amin'ny “Ampamoakan'ny Wikileaks” :
Mikasika ilay tsindry aloka atao ny filazam-baovao sy ny politisiana avy amin'ny PSDB [Social Democracy Party] ataon'ireo orinasa Amerikana mpitrandraka solika mba handraisana ny fitantanana ny “pre-salt” [fari-dranomasina ahitana loharano-tsolika be] – izay faritry ny sisintanin-tsolika farany eto amin'izao tontolo izao.
Araka ny adihevitra mitranga[pt] mikasika ny loza mety ho ateraky ny fitrandrahana an-dranomasina eo amin'ny totonlo iainana , Greenpeace ao Brezila dia nanomboka nanapariaka ilay tenifototra #VazaChevron (fahaverezan'ny solika Chevron, kilalaon-teny midika hoe Mandehana Mandeha ry Chevron), ary nanararaotra ilay fotoana mba hanaovana fanangonan-tsonia [pt] ho fanoherana ny fitrandrahana solitany kasain'i Chevron hatao ao amin'ny faritr'i Abrolhos, faritra arovana ao amin'ny fanjakan'i Bahia.
Hetsiky ny Greenpeace ao Brezila manery an'i Chevron mba hanisy fangaraharana mikasika ny antony sy ny vokatr'ilay fahaverezan-tsolika an-dranomasina.
Valéria Müller (@valeria47), nandefa bitsika avy ao amin'ny Porto Alegre, nilaza fa [pt]:
Rehefa manam-bola ianao, dia afaka ny manaparitaka solika any an-dranomasina ary tsy ho lasa vaovao izany #VazaChevron
Ao amin'ny Twitter, dia maro ireo nanakiana ilay onitra, izay eo ho eo amin'ny “tombombarotra tapak'andro” ho an'i Chevron monja, toa an'i Mirinho Braga (@mirinhobraga),Ben'ny tananan'i Buzios, izay nametra-panontaniana hoe :
Mandoto ny ranomasintsika ny Chevron … IBAMA dia nampandoa onitra an-tapitrisa an'ilay orinasa. Inona izany no mba azon'ireo mpanjono niharan-doza ?
Ilay famantarana an'i Chevron voaloto amin'ny solika. Nozaraina tao amin'ilay bilaogy Tijolaço.
Eo anatrehan'ny “hosoka nataon'ny Chevron hita mifandray amin'ny loza ara-tsolitany goavana tany amin'ny manodidina an'i Ekatora” , nisy ny firaisankina sy fanairana avy amin'ireo mafàna fo ao amin'io firenena io, izay nahatohina ihany koa ny àlany avy tamin'ilay fahaverezan-tsolika an-dranomasina an'ilay orinasa, araka ny efa nambaran'ny Global Voices tamin'ny fanombohan'ity taona ity.
Ny Alarobia, 23 Novambra, Chevron dia nandrasana hanome fanazavana fanampiny mikasika ilay loza tamin'ny alalan'ny famelabelarana azon'ny daholo atrehana tao amin'ny Kaomity Momba ny Tontolo Iainana ao Amin'ny Antenimieran-doholona, teo ambany fanatrehan'ny Minisitry ny Tontolo Iainana Izabella Teixeira, Minisitry ny Harena An-kibon'ny Tany Edison Lobao ary ireo solotenan'ny “National Petroleum Agency” (ANP) sy ny IBAMA.
Tamin'ny fotoana namoahana ity lahatsoratra ity, ny lahatsoratr'i Fernando Brito farany mikasika “Ny amin'ny fakàna risika” ataon'i Chevron, dia mamela fanontaniana eny ho eny :
Ny fiara iray tsy midofotra noho ny tsy fitandremana fhafainganam-pandeha, fa zavatra izay no maha-mora ilay loza izany.
Raha ny mikasika ny familiana, indray, io no antony iray anesorana ny fahazahoan-dàlan'ny sasany. Ho esorina amin'ny Chevron-Texaco ve izany ny fahazoan-dàlany?
João Miguel Lima, Raphael Tsavkko ary Thiana Biondo dia niara-nanatontosa ny fikarohana tamin'ity lahatsoratra ity.